साँच्चै के कारण भईरहेछ पेट्रोलियम पदार्थको अभाव ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > साँच्चै के कारण भईरहेछ पेट्रोलियम पदार्थको अभाव ?
सिराहा। सिरहामा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभावका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।विशेषगरी दुईपाङ्ग्रे साना सवारी साधनका चालकले लाइनमा बसेर पनि पेट्रोलको अभाव भोगिरहेका छन् ।
लहान, गोलबजार, मिर्चैया, सिरहा माड्र, बन्दीपुरलगायत बजार तथा जिल्लाको ग्रामीण भेगमा रहेका पेट्रोल पम्पमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको छ । घन्टौँसम्म लाइनमा बस्दा पनि पेट्रोल नपाएपछि मिनरल वाटर र मदिराका बोतलमा रु एक सय ५० प्रतिलिटरका दरले पेट्रोल किनेर प्रयोग गर्नु परिरहेको सिरहा माड्रका रामानन्द गुप्ता बताउँछन् ।
प्रतिलिटर रु एक सय दुई पर्ने पेट्रोल लिन घन्टौँ लाइन लाग्दासमेत पाउन नसकेको उनले बताए । सहज रुपमा पटो«लियम पदार्थ आपूर्ति भइरहेको भए पनि तस्कर र पम्प सञ्चालकको मिलेमतोमा ग्यालेनमा भरेर भारतीय बजार पठाउने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
गोलबजारस्थित नवदुर्गा ट्रेडर्स पेट्रोल पम्पका सञ्चालक रामसगुन यादव एकपल्ट बिक्री वितरण प्रक्रिया खल्बलिँदा सहज हुन कम्तीमा १५ दिन लाग्ने बताउँछन् । ट्याङ्कर सञ्चालकको आन्दोलन, मधेसमा फागुनको तेस्रो हप्ता भएको बन्द हडताललगायत कारणले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति केही असहज भएको उनको भनाइ छ ।
२०७३ चैत्र ८ गते १६:१० मा प्रकाशित
सेयर बजारमा हरियाली, करिब ३८ अंकले सूचक बढ्दा १ अर्ब २६ अर्बको कारोबार
होस् गर्नुहोस्,सडक ढाकेर कार्यक्रम गरे सिधै जेल !
मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज अस्पताल भर्ना !
चम्पादेवी मन्दिर फेरि बन्दै, पुरातत्वले दियो ८ लाख
दुई बैंकसहित तिन संस्थाको हकप्रद सेयर निष्काशनबारे तपाईलाई कति थाहा छ ? पढ्नुहोस्